सुपर कम्प्युटरले गर्यो मेस्सी रोनाल्डो मध्यको विशिष्ट खेलाडी निर्धारण !! रोनाल्डो कि मेस्सी हेर्नुहोस ? – " कञ्चनजंगा News "
सुपर कम्प्युटरले गर्यो मेस्सी रोनाल्डो मध्यको विशिष्ट खेलाडी निर्धारण !! रोनाल्डो कि मेस्सी हेर्नुहोस ?
No Comments on सुपर कम्प्युटरले गर्यो मेस्सी रोनाल्डो मध्यको विशिष्ट खेलाडी निर्धारण !! रोनाल्डो कि मेस्सी हेर्नुहोस ?
अथक फुटबल समर्थकमा मेस्सी रोनाल्डो विचको द्वन्द को विशिष्ट भन्ने प्रश्न सकिएको छैन र सकिने आधार पनि । समर्थकको रोजाईमा कुनै खेलाडी रहेता पनि रोनाल्डो मेस्सी यस आधुनिक फुटबलका सर्वाधिक ठुला प्रतिद्वन्दी हुन् र मान्न सकिन्छ ।
तर हालै बेल्जियमका केहि विज्ञहरुले डिजिटल प्रबिधिको दृष्टिकोण मार्फत रोनाल्डो र मेस्सीको फुटबल स्तरलाई डिजिटल मापन गर्दै सुपर कम्प्युटरको मद्दतमा को अब्बल रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेका छन् । विज्ञान फुटबल विधका अनुसार VAEP को प्रयोजन र डच तथ्यांकलाई परिमार्जन गर्दै उक्त आधार तयार पारिएको बताइएको छ । उक्त तथ्यांक निस्कासनका निम्ति केहि शुत्र अपनाइएको थियो जसमा पूर्ण रुपमा दुवै मेस्सी रोनाल्डोको खेललाई मध्यनजर गरिएको थियो । शुत्र अनुसार खेलमा रहेको बल ड्रीब्लिंग र डिफेन्सलाई हेरिएको थियो ।
तर उक्त बेल्जियमका एक मास्टर भन्छन खेलमा गरिएको गोल र एस्सिस्टले उक्त तथ्यांकलाई मापन गरिन्छ । तर खेलमा हुने १६०० क्रियाकलापलाई डिजिटल प्रबिधिले मापन गरेको बताइएको छ ।
२०१३ देखि रोनाल्डोले मड्रिड छोड्नु अगाडी सम्मका पूर्ण तथ्यांक र गतिविधिलाई समेटिएको थियो । VAEP को आकडा सार्वजनिक गर्दा मेस्सीको १.२१ प्राप्तांक रहेको थियो भने रोनाल्डो मेस्सीको आसपास नै देखिएनन् रोनाल्डोको प्राप्तांक मात्र ०.६१ रहेको थियो ।
← राजावादी ज्ञानेन्द्र शाहीको गाली गलौज सहन नसक्ने-युवा सङ्घ अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा → ‘एन्टी हिरो’ मा अनमोलको जोडी जसिता